မောင်စေတနာ: Mario Forever Game
မိမိတို့ ကလေးဘ၀တုန်းက ဂိမ်းစက်တွေ စပေါ်တော့ Family Game ပါ။ နောက်တော့ နီပန်ဒိုး။ ပြီးတော့ Sony Game။ PS2 ... PS3 , Network Game စသဖြင့် ပေါ်လာခဲ့တယ်။ မည်သည် ဂိမ်းအမျိုးအစားနဲ့ ကစားနည်းသစ်တွေ ပေါ်စေခဲ့မူ မိမိတို့ရဲ့ အသည်းမှာ စွဲနေခဲ့တဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုကတော့ Mario Game လေးပါ။
အဲဒီ ဂိမ်းလေးကို ဆော့ကစားချင်စိတ် ဖြစ်မိတာနဲ့ အင်တာနက်မှာ ပြန်လည်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ဖရီးနဲ့ အပြည့်ဆော့လို့ရတာကို ရှာရသေးတယ်။ ရလာတော့ ကွန်ပျူတာထဲ သွင်းပြီး ဆော့ကြည့်တယ်။ အရင်အတိုင်းပဲ ဆော့ကောင်းဆဲပါ။ ကဲပါလေ။ စိတ်ဝင်စားသူများ ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။
hi bro , link expired. could u please upload again. thanksamillion
2:44 AM, December 31, 2011